सोलुखुम्बु आउनु है हजुरको लिरिकल भिडियो सार्बजनिक! भिडियोमा सोलुखुम्बुको मनमोहक दृश्य हेर्नुस। «
सोलुखुम्बु आउनु है हजुरको लिरिकल भिडियो सार्बजनिक! भिडियोमा सोलुखुम्बुको मनमोहक दृश्य हेर्नुस।
प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०७५, बुधबार १५:३९
तपाई कहिल्यै सोलुखुम्बु जानुभएको छ?सायद जानुभएको होला या जानु भएको छैन होला।तर सोलुखुम्बु यस्तो जिल्ला हो जहा बर्षेनी स्वदेशी तथा विदेशी लाखौ पर्यटक सोलु पुग्छन।जहा विश्वकै सर्बोच्च सिखर सगरमाथा रहेको छ।त्यहा पुग्न जोकोही लालायित नहुने कुरै रहेन।
यस्तो सुन्दर ठाउमा तपाईलाई गित मार्फत निम्तो पनि छ।”सोलुखुम्बु आउनु है हजुर…बोलको गितको लिरिकल भिडियो फुलपातिको अवसरमा पत्रकारहरु बिच युट्युव बाट सार्बजनिक गरिएको छ।
उक्त गितको शब्दरचना डा.रेनुका “सोलु” गरेका छन भने संगीत जसिहाङ राई को रहेको छ त्यसैगरी स्वयम संगीतकार जसिहाङ र गायिका जेनि खालिङ को स्वर छ।
हामी जुन ठाउमा जन्म्यो र जुन ठाउ मा हुर्क्यो त्यही माटोको सुगन्ध बोकेको गीत हो यो।गीतमा मायाको शब्दहरु भेटिदैनन तर मायाको आभास भने अवस्य छ-गायिका जेनि खालिङ भन्छिन।
गितले सोलुखुम्बुको भुगोल,प्राकृतिक सुन्दरता,जातिय विबिधता,लगायत समग्र विशेषताको झलक दिदै सोलुखुम्बु आउने निम्तो गर्दछ।
रचनाकार डा.रेनुका “सोलु” आफ्नो गृहजिल्ला को मायाले नै यो गित लेख्न उत्प्रेरित भएको र आफुले सोलुको प्रत्येक गाउपालिका नगरपालिका लाई गीतमा अटाउन प्रयास गरेको उनको भनाई छ।
आफुले दर्जन पुस्तक प्रकाशन गरिसक्दा भन्दा पनि आफ्नो जिल्लाको गित लेख्न पाउदा बढी खुशी मिलेको उनि बताउछिन।
आफ्नो स्वरमा दर्जनौ गीत रेकर्ड गरिसकेका जसिहाङ राईको यो पछिल्लो गीत हो ।जसिहाङ राई गायक मात्र नभएर र रचनाकार र सङ्गितकार समेत हुन।उनले “सोलुखुम्बु आउनु है हजुर ~~~गीत को चाडै म्युजिक भिडियो पनि निर्माण गर्ने सोहि गीतको लिरिकल भिडियो सार्बजनिक गर्ने क्रम मा बताए।म्युजिक भिडियो मा सोलुखुम्बु को सम्पुर्णता लाई उजागर गरिने उनको भनाई छ।
हामी लिरिकल भिडियो मा सोलुखुम्बु को मनमोहक दृश्य सहित विविध जाती समुदायको सास्कृतिक भेष बाट आनन्द लिन सक्छौ । म्युजिक भिडियो मा सोलुखुम्बुको सम्पुर्ण बिशेषता र पहिचानको जिवनता दिने प्रयास गर्ने सङ्गितकार जसिहाङ राईको भनाई छ।
भिडियोको लागी लिङ्क खोल्नुस।